Soo dejisan AVG AntiVirus Free 20.10.3157 – Windows – Vessoft
WindowsAmnigaAntivirusesAVG AntiVirus Free
Bogga rasmiga ah: AVG AntiVirus Free
AVG AntiVirus Free – kumbuyuutar aasaasi ah iyo ammaanka internetka. Antivirus waxay sameeyaan kombuyuutar waxayna raadinayaan dhamaan faylasha oo ay weheliyaan habdhaqanka barnaamijka ku shaqeeya wakhtiga dhabta ah si looga hortago in la galo hanjabaadyo isla markaana ka takhalusto fayrasyada horay loo soo geliyey. AVG AntiVirus Free waxay damaanad qaadaysaa ilaalinta ka hortagga shabakadaha iyo khatarta khatarta ah iyadoo ka hortageysa galista qalabka casriga ama nacaybka iyadoo la adeegsanayo boggaga shaki iyo ilaha kale ee internetka. Software-ka ayaa ka digtey boggaga feylka ee fayruuska ah iyo xayawaanka la xariiro si ay u soo diraan emails-ka sida xisaabta user. AVG AntiVirus Free wuxuu leeyahay nidaam daruuri ah si loo ogaado fayraska, kaas oo la xoojiyey tiknoolajiyada casriga casriga si loo horumariyo aqoonsiga khatarta cusub. Sidoo kale, AVG AntiVirus Free waxay taageertaa hab gaar ah kaas oo xayasiinta ogeysiisyada ka imanaya Windows ama barnaamijyada kale haddii uu isticmaaluhu isticmaalo barnaamijka lagama maarmaanka u ah habka buuxda ee shaashadda.
Ka ilaalinta faylasha khatarta ah waqtiga dhabta ah
Nidaamka falanqaynta jirka iyo habdhaqanka
Ilaalinta waxqabadka internetka
Hubinta faylalka emailka
Soo dejisan AVG AntiVirus Free
Faallo ku saabsan AVG AntiVirus Free
AVG AntiVirus Free Xirfadaha la xiriira